Urur siyaasadeed mucaarad ah oo looga dhawaaqay Puntland - calanka.com
Urur siyaasadeed mucaarad ah oo looga dhawaaqay Puntland (Calanka.com) - Posted at 11/12/2012 By Saadaq
Xaflad balaaran oo lagu soo bandhigay urur siyaasadeedka mucaaradka ah ee MIDNIMO ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka hotel juba ee magalada boosaso.
Ururkani ayaa waxaa uu ka mid noqon doonaa xisbiyada kala duwan ee u tartamaya doorashada madaxnimada Puntland oo dhawanahan looga dhawaaqayay magalada boosaso,waxaana uu kaga duwan yahay xisbigani oo ah mid mucaarad ah.
Xisbigani mucaaradka ah ee Midnimo ayaa waxaa madax u ah Dr:Saadaq Eenow oo ah aqoon-yahay soomaaliyeed oo guud ahaan dalka laga wada yaqaano,waxaana mar uu ka hadlay xaflada lagu soo bandhigayay ururkan sheegay in loo dhisay in wax lagu saxo xisbiga uu madaxda ka yahay.
Mar uu ka hadlaya Dr:Saadaq arimaha Puntland waxaa u sheegay in lagu mashquulay sanad ku darsasho iyo koox kale oo mucaaradsan in sanad lagu darsado,iyadoona la iska hilmaamay arimo badan oo ka horeyay waxaana uu ku baaqay in labada dhinac xooga saaran danta guud ee umadda.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Midnimo Saadaq Eenow ayaa waxaa uu ka gaabsaday in uu si cad uga hadlo arimaha muranka badan ka taagan yahay ee sanadka dawlada haatan Jirta Puntland ku darsaneyso,waxaana taasi badalkeeda uu shegay in ay soo saari doonan dhawaan bayaan cad oo arimahaasi ay kaga hadlayan xisbi ahaan.
Xaalada dhaqaalo xumo iyo dhibaatoyinka kale ee ka jira Puntland ayuu ku tilmaamay in loo bahanyahay in xooga la saaro si looga hortago faqri baaha oo ka dhaca dhulka taasin ay tahay waajib saaran cid kasta oo xil ka heysa Puntland.
Xisbiga midnimo ayaa ah xisbi mucaareed oo si cad u sheegay in ay yihiin xisbi sixid waxaana ku jira rag badan oo aqoon yahano ah kuwaasi oo u arka xalka Puntland in uu ku jiro in lagu dhameeyo hab aqooned lagana haboon yahay qori caaradiisa in xalka laga doono.
Mohamed Abdirashiid Keenadiid